ငါးဖယ်သုတ် | Wutyee Food House
တရုတ်စတိုင် ပုဇွန်ချိုချဉ် »
June 21, 2010 by chowutyee ငါးဖယ်သုတ်
၁။ ငါးဖယ် – ၃၀ကျပ်သား (ထောင်းပြီးသား)
၂။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
၃။ ဂျုံ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၄။ ဂျင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၅။ ကြက်ဥ(အကာ) – ၁လုံး
၆။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ရ။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁။ ခရမ်းချဉ်သီး – ၂လုံး (အစေ့ထုတ် ၈စိပ်စိပ်ပါ)
၂။ သံပရာသီး – ၂လုံး (အစေ့ထုတ် အရည်ညစ်ပါ)
၃။ ငရုတ်သီးဆီသပ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း (ဒယ်ထဲ ဆီထည့်၊ ဆီပူလျှင် ငရုတ်သီးမှုန့် ၃ဇွန်းထည့်)
၄။ ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ကြက်သွန်နီ – ၃လုံး (ပါးပါးလှီးပါ)
၆။ နံနံပင် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
၁။ ငါးဖယ်ကြော်ရန် ပါဝင်သောပစ္စည်များ ဖြစ်သော (ငါးဖယ်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဂျုံ၊ ဂျင်း၊ ကြက်ဥအကာ၊ ကြက်သွန်မြိတ် ) အားလုံးကို ဇောက်ပန်းကန်တစ်ခုထဲ သို့ ထည့်နုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ငါးဖယ်များ မကပ်စေရန် လက်တွင် ဆီသုတ်၍ နုယ်ထားသော ငါးဖယ်များကို အလုံးပြားလေးများ လုပ်လိုက်ပါ။ (အရွယ်မကြီးပါစေနှင့်)
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်ပြီး ငါးဖယ်လုံများကို ထည့်ကြော်ပေးပြီး ဇကာဖြင့် ပန်းကန်တစ်ခုထဲ ပြန်ဆယ်ထားပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားသော ငါးဖယ်များကို ပါးပါးအစောင်းလှီးလိုက်ပါ။
၅။ ထို့နောက် ပန်းကန်လုံး တစ်ခုထဲသို့ ငါးဖယ်သုတ်ရန် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ( ငါးဖယ်၊ ခရမ်းခဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပဲငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးဆီသပ်၊ နံနံပင်၊ သံပရာရည်) အားလုံးကို ရောနယ်လိုက်ပါ။
၆။ အရသာအပေါ့အငံ အနေတော်လျှင် ငါးဖယ်သုတ်ကို ထမင်းနှင့် မြိန်ရှပ်စွာ စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 12 Comments	12 Responses
on June 21, 2010 at 8:49 am | Reply mon
ဝတ်ရည်ဘလော့ကိုတော့ အမြဲဖတ်တယ်. ကြိုက်တယ်.
on June 23, 2010 at 3:30 am | Reply chowutyee
ဟားဟား.. ရပါတယ် ငံပြာရည်နဲ့လည်း။ အမြဲအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲ.. ချက်လည်း စားကြည့်ပါအုန်းနော်..😉
on June 24, 2010 at 5:25 pm | Reply pyayko
မဝတ်ရည်ရေ.. ပြီးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဝတ်ရည် အတွက်ကော ကျန် အမွှာညီမ တစ်ယောက်ကိုပါ (HAPPY BIRTHDAY ) ပါလို့နော်။… နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ ဒါနဲ့ ငါးဖယ်သုတ်တော့ ..လုပ်နည်းကြည့်သွားတယ်ဗျာ့.. ကျွန်တော့်ဆီမှာ ငါးဖယ်လုပ်တဲ့ ငါးဝယ်လို့မရတော့ ဘယ်ငါးနဲ့လုပ်စားရမလဲ မသိဘူး..ဘယ်ငါးနဲ့လုပ်စားလို့ရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါဦး။ ငါးဖယ်ချက်နဲ့ ငါးဖယ်အသုတ်ဆို crazy မလို့ပါ … 😀
on June 26, 2010 at 12:47 pm | Reply chowutyee
Really Thanks Ko PyayKo!!🙂 ငါးဖယ်သုတ်က တခြားငါးနဲ့ လုပ်လို့ ရမယ် မထင်ဘူး…🙂
on June 28, 2010 at 10:36 am | Reply ငယ်လေး
ငါးဖယ်သုပ်လုပ်နည်းလေး ပြောပြလို့ ကျေးဇူးပဲ မ၀တ်ရည်ရေ…. လုပ်စားအုန်းမှပဲ… ပြောရင်း သွားရည်တောင် ယိုလာပြီ….😀
on June 30, 2010 at 8:24 am | Reply chowutyee
ငယ်လေးရေ လုပ်စားပြီးရင် အဆင်ပြေမပြေ အကြောင်းပြန်အုန်းနော်..
on March 8, 2012 at 8:58 pm | Reply oneday1day
အစ်မရေ reblog လုပ်သွားပါတယ်နော် ….ခွင့်မတောင်းမိလို့ စိတ်မရှိပါနဲ့နော.်…
on March 13, 2012 at 1:57 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးပြုပြီ website: http://www.wutyeefoodhouse.com လေးပဲ reference ပေးရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..🙂
on March 9, 2012 at 7:33 am | Reply oneday1day
Reblogged this on oneday1day.
on March 13, 2012 at 2:01 pm | Reply chowutyee
on April 17, 2012 at 1:21 am | Reply zaw
ငါးဖယ်သုပ်က ငါးဖယ်အပြင် ငါးကွင်ရှပ်ငါးနဲ့လည်းလုပ်လိုကရပါတယ် နိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့ ငါးဖယ်ကရှာလို့မရဘူးလေ ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး စမ်းကြည့်ပါနော်
on April 19, 2012 at 1:43 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ